Izindaba - Umehluko phakathi kweLithium Drill 12V kanye ne-16.8V
Ama-drill kagesi asetshenziswa kaningi empilweni yethu yansuku zonke. Lapho sidinga ukubhola izimbobo noma ukufaka izikulufu ekhaya, sidinga ukusebenzisa izivivinyo zamandla. Kukhona futhi umehluko phakathi kokuzivivinya kwamandla. Okuvamile ngama-volts ayi-12 nama-volts ayi-16.8. Uyini-ke umehluko phakathi kwalokhu okubili?
Uyini umehluko phakathi kwe-12V ne-16.8V sokuzivivinya kwamandla?
Umehluko omkhulu phakathi kwalezi zinhlelo zombili zokuzivivinya zikagesi yi-voltage, ngoba i-voltage eyodwa ingu-volts ayi-12, enye ingama-volts ayi-16.8, angahlukaniswa ngqo, futhi kuzoba nombukiso ocacile kwiphakeji.
2.Ijubane lihlukile. Lapho isebenza ngaphansi kwemibono ehlukene, izodala isivinini esihlukile. Uma kuqhathaniswa, i-volt kagesi engu-16.8 volt izoba nesivinini esikhulu.
Umthamo webhethri uhlukile. Ngenxa yezilinganiso ezihlukene, ngakho-ke udinga ukukhetha ama-motors ahlukene futhi ulungiselele amandla ahlukile kagesi. Ayanda voltage, ayanda umthamo electronic.
Ukuhlukaniswa kwama-Electric Drill
Ihlukaniswe ngokwenhloso, kunezikulufo noma izikulufo eziziphilelayo, futhi ukukhethwa kokuzivivinya kagesi nakho kuhlukile, ezinye zilungele kakhulu imishini yensimbi, kanti ezinye zilungele izinto zokhuni.
Ihlukaniswe ngokusho kwamandla ebhethri, okusetshenziswa kakhulu ngama-volts ayi-12, kukhona ama-volts ayi-16.8, nama-volts angama-21.
Ihlukaniswe ngokwezigaba zebhethri, elinye ibhethri le-lithium, kanti elinye ibhethri le-nickel-chromium. Esokuqala sithandwa kakhulu ngoba siyaphatheka kalula futhi sinokulahleka okuncane, kepha khetha ibhethri le-nickel-chromium intengo yesandla sokubhola kagesi izobiza kakhulu.